Umhla wokuqala uhlala unomdla kwaye ulindelwe ixesha elide. Yaye malunga nendlela eya kudlula ngayo, ukuphuhliswa kobudlelwane obuxhomekeke kuyo. Indlela yokuziphatha ngomhla wokuqala, apho uya khona okanye, ngokuchaseneyo, ungahambi uxelele eli nqaku.
Umhla wokuqala wenza ukuba umntu ngamnye abe nemvakalelo enokuzikhethela kunye neyodwa. Oku kukuvuyisa, kunye nentonwabo encinane, nokulindela into engavamile. Sizama ukufezekisa imbonakalo yethu: sicinga ngokucokisekileyo ngomfanekiso wethu, sibeka iintloko zethu ngokulandelelana, amantombazana asebenzise ukuzenzela. Ngokubanzi, sizama ukuzityhalela kwi-side side.
Kodwa ungakulibali ukuba ukunyaniseka kuyisitshixo ekuphumeleleni kubuhlobo. Intombazana enesilumko esilula, i-hairstyle engenakukhangela, igqoke ngengubo egqabileyo, ibangela intlonelo ngakumbi kwaye ibangele ingqalelo ngaphezu komntu oqaqambileyo. Kuyafana okufanayo malunga nalo mfana. Ukuba iphunga leqhumiso layo libonakala li-mile away, ukuba iinwele ezivela kwi-gel kunye ne-foam ezingenakususwa, kwaye yonke into ibonakala ingabonakaliyo, ke intombazana le ntlonelo iya kubangela ukuhleka okungakumbi kunomdla kunye novelwano. Musa ukulibala malunga nemithetho yokuqala yokuziphatha.
Imigaqo yokuziphatha ngomhla wokuqala:
ukugcina umgangatho - abantu abatsha kufuneka bavule umnyango kwintombazana, banike isandla, bahlale etafileni, baqhube isitulo, njl njl., kwaye amantombazana kufuneka adlale encinci, amnike ithuba lokuba ngumntu oyinyaniso;
ukugcina ingxoxo enobungane, ngelixa uphepha iingcaciso; Musa ukuqonda, buza malunga nezihlobo, ingeniso, impahla, ubudlelwane obudlulileyo, njl.;
ungakhange ukhangele omnye umntu (ka) - oku akunakucacile, kwaye ngaphandle koko, intombi yakho (okanye umneneli) inokuziva ikhululekile kwiimeko ezinjalo;
Musa ukubeka omnye nomnye kwisimo esingenakwenzeka, ukubonakalisa iingeniso zabo zengqondo okanye ngokwenyama; Umhla awukho ukhuphiswano, kwaye akunandaba nokuba yeyiphi na inzuzo, into ephambili kukungena kunye nokuzama ukuseka ubudlelwane;
Musa ukukhalaza njalo kwaye ungabonakali, ubonise ubuthathaka babo-oku kubonakala kubalulekile kumantombazana nakumfana; uhamba ngomhla, siceba ukuzonwabisa kunye nokuchitha ixesha, kunye nezikhalazo zabantu kunye nokunganeliseki kungekudala kuya kubangela ukunganeliseki kunye nomnqweno wokushiya umnxibelelwano ngokukhawuleza.
Njengomthetho, ngaphambi komhlangano, umbuzo uhlala uvela: "phi na ukuya kumhla wokuqala kunye nento oyenzayo?". Kukho inketho eninzi kwaye bonke bayabodwa, ngokokuqala okokuqala buza malunga neminqweno kunye nezinto zokuzilibazisa zomntu ohamba naye ngosuku. Mhlawumbi intombazana okanye inkwenkwe sele ifuna ukuya kwikhonsathi yomculi okanye ukuya kwimeko ethile. Yaye iya kuba yindoda kunye nendawo yakho.
Ukuba usasafuna ukukhetha indawo yokuqala ngosuku lwakho, simangaliswe kwaye ube nexesha elifanelekileyo, ngoko kukukunceda ezinye izindawo ezidumileyo ukutyelela.
Iindawo, amaziko kunye nemisebenzi efanelekileyo ngomhla wokuqala:
I-rink yokudoba yindawo enomtsalane yothando, efanelekileyo ngomhla. Kodwa umele ucele apho ukuba wena ngokwakho unemibuzo ethembekileyo kwiikhethi. Ngaphandle koko, usengozini yokufumana amanqaku "2: 0" kwaye umhla wokuqala unokuba ngowokugqibela.
Imincintiswano yezemidlalo ifanelekile umhla nomntu ochaphazelekayo okanye onomdla kwimidlalo. Ngokukodwa ukuba kukho imincintiswano enomdla kwisixeko sakho.
Ipaki yokuzonwabisa iyindawo yendawo yonke umntu othanda ngayo ngaphandle kokungafani. Unokufumana iimvakalelo ezintle kunye ne-adrenaline, ujabule nomphefumlo, kwaye kubaluleke kakhulu, kuthetha kwaye ukwazi omnye nomnye.
Bowling ingcinga efanelekileyo ngomhla osebenzayo. Xa ukhetha olu hlobo lwendibano, kuya kufuneka uxelele isiqingatha sakho sesibini ukwenzela ukuba ukhetho olufanelekileyo lukhethwe.
Ipikiniki yindlela ekhethekileyo yokukhetha ngomhla wokuqala, ngaphandle kokuba kukho isimo sezulu eshushu neshushu. Thatha nawe yonke into oyifunayo (iziphuzo, ukutya, iingubo, mhlawumbi igitare), kwaye unokuqhagamshelana ngokugqibeleleyo emoyeni omtsha.
Ikhonsathi yomculo ekhethiweyo ngokuhambelana neminqweno kunye nokukhethwa komnye nomnye, ingaba yindawo enhle yomhla, kodwa ungakulibali ukuba umculo ophezulu kakhulu okanye umoya osemthethweni ungaphazamisa uqhagamshelwano lwakho.
Indawo yokutyela okanye i-cafe mhlawumbi iyindawo eqhelekileyo yokunyuka ngomhla wokuqala, kodwa ke, nabani na owala i-cafe ecocekileyo okanye yokutyela.
Umboniso okanye igalari iya kuba kukuthanda komntu odala, kwaye kuya kunceda ukuqonda kangcono.
Hamba kwisikhephe kulungele umhla, kodwa, hayi, esi siganeko sifanelekile kuphela sezulu eshushu, ngaphandle kwesiphepho nomoya.
Apho ungafanele uhambe ngomhla wokuqala:
Iiklabhu, amaqela kunye nezinye iindawo ezixhamlekileyo azifanelekanga ngosuku lokuqala. Kwiindawo ezinjengoko kunzima ukuthetha kunye nokufunda into malunga nomnye.
Wena, abazali okanye ngabahlobo, akudingeki ukumema umntu ekhaya. Unokuziva ukhululekile ngeenxa zonke ngabahlobo bakho kunye nosapho. Ukongeza, ngomhla wokuqala le ndawo iyimfihlo.
Ukuzivocavoca, indawo yokuzivocavoca yindawo yezemidlalo kunye noqhagamshelwano nabahlobo, kodwa kungengomhla. Kuqondwa ngokucacileyo, kwaye musa ukubeka omnye nomnye kwisimo esinzima.
I-Sauna, ugu lolwandle, ibhobho lokubhukuda, ngokubanzi, zonke ezo ndawo apho kufuneka uzikhumbule khona. Abanye abantu banamahloni ngezinye iimpazamo zabo kwaye bazive bengakhululekile.
Imihla yokuzalwa, imitshato kunye neminye imibhiyozo ayifanelekanga umhla wokuqala. Ukuba ngaba abagwebi (b) bembhiyozo bengaziwa kubo bobabini, ke umntu unokungabi nantoni kwaye uyamkhathaza.
Xa ukhetha indawo kwintlanganiso yokuqala, kufuneka uhlale ukhumbule iminqweno yomntu wesibini, cinga ngendlela yena (uya kuvakalelwa ngayo), nokuba unako ukuthetha ngokuqhelekileyo kwaye usethe uqhagamshelwano.
Yiba nexesha elihle!
Ileta enobungqingili enobumba kumntu
Kuthekani ukuba andiyazi indlela yokunxibelelana nabafana, ndinamahloni?
Indlela yokudala i-romance emoyeni kwintombazana
Indlela yokwenza iphepha lakho lomntu kwi-dating site likhangele ngakumbi
Ukuncoma kunye nemiqondiso yokuqwalasela umfazi wakhe
Ukwabelana ngesondo phakathi kwendoda esatshatileyo kunye nomfazi
Ziziphi iindlela zokugqoka ezikhoyo?
Imizimba ye-Physiotherapy ye-muscular muscle
IHoroscope yePisces-Abafazi ngo-Matshi 2017
Amanyathelo omdabu we-prostatitis engapheliyo
UBawo uZhanna Friske uthemba ukufumana umzukulu wakhe kwiintsuku ezizayo
Ikhononut pudding ne-caramel sauce
Salmon ebhaka ngegalikhi kunye nesardadi
I-gymnastics ehlekisayo yabantwana
I-Shrimps ne-curry sauce
Inkukhu enezinkukhu ezigxiliweyo
Indlela yokudala ukungcola ekhitshini
Iingcebiso: njani ukhetha ukugqoka umtshato
Ukulungiswa kwangaphambili kwesikolo komntwana esikolweni
Abantwana abadala, abazali bahlukanisile - njani ukunyanga?